बिल्कुलै बे’वास्ता नगरि देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी पढेर सेयर गर्नुहोला !!!! – live 60media
बिल्कुलै बे’वास्ता नगरि देख्ने बित्तिकै ॐ लेखी पढेर सेयर गर्नुहोला !!!!
हिन्दु धर्म ॐ लाई म’हामन्त्र मानिन्छ । कुनै पनि पूजा वा मन्त्रोच्चारणको सुरुवात ओम्बाट हुने गर्छ । ओम्को उच्चारणले भगवान मात्र खुशी हुने होइन्, यो म’न्त्रको जपबाट मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा पुग्छ । ओम् उच्चारणबाट उत्पन्न हुने तरंगले दिमागलाई शान्त राख्न स’हयोग पुर्याउँछ । यसले धेरै विरामीहरु ठिक हुने कुरा वै’ज्ञानिक अ’नुसन्धानबाट प्र’माणित भइसकेको छ ।
यसले चिन्ता, तनाव, मानसिक थकानलाई टाढै राख्छ ।४) ब्लड सर्कुलेसन :ओम्काे उच्चारणले शरीरमा ब्लड सर्कुलेसनलाई पनि स’हयोग पुर्याउँछ ।
यसको दिनहुँ उच्चारण गर्दा रगतमा अक्सिजनको मात्रा वृद्धि हुन्छ । ५) स्वस्थ मुटु:दैनिक यसकाे जप गर्दा ल‌ंग्स, बिपी र ब्लड सर्कुलेसनमा सन्तुलित हुन्छ । यसले मुटुपनि स्वस्थ रहन स’हयाेग गर्छ ।६) डाइजे शन :ओम् उच्चारणले पेटमा भा’इब्रेसन उत्पन्न हुन्छ, जसले पाचन प्रक्रिया सन्तुलित रहन्छ ।हिन्दु धर्म ॐ लाई म’हामन्त्र मानिन्छ । कुनै पनि पूजा वा मन्त्रोच्चारणको सुरुवात ओम्बाट हुने गर्छ ।
ओम्को उच्चारणले भगवान मात्र खुशी हुने होइन्, यो मन्त्रको जपबाट मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि फाइदा पुग्छ । ओम् उच्चारणबाट उत्पन्न हुने तरंगले दिमागलाई शान्त राख्न स’हयोग पुर्याउँछ । यसले धेरै विरामीहरु ठिक हुने कुरा वै’ज्ञानिक अ’नुसन्धानबाट प्र’माणित भइसकेको छ ।१) थाइराइड:हरेक दिन ओम्काे उच्चारण गर्दा थाइराइडको स’मस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
२) एन्जाइटी:ओम्काे उच्चारणले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा पुग्छ । यसको उच्चारणले तनाव, ड’रजस्ता स’मस्याबाट मुक्ति पाइन्छ । ३) स्ट्रेस वा टेन्सन:ओम् मन्त्रको जप गर्दा मानसिक शान्ति मिल्छ । यसले चिन्ता, तनाव, मानसिक थकानलाई टाढै राख्छ ।४) ब्लड सर्कुलेसन :ओम्काे उच्चारणले शरीरमा ब्लड सर्कुलेसनलाई पनि स’हयोग पुर्याउँछ । यसको दिनहुँ उच्चारण गर्दा रगतमा अक्सिजनको मात्रा वृद्धि हुन्छ । ५) स्वस्थ मुटु:दैनिक यसकाे जप गर्दा ल‌ंग्स, बिपी र ब्लड सर्कुलेसनमा सन्तुलित हुन्छ । यसले मुटुपनि स्वस्थ रहन स’हयाेग गर्छ ।६) डाइजे शन :ओम् उच्चारणले पेटमा भा’इब्रेसन उत्पन्न हुन्छ, जसले पाचन प्रक्रिया सन्तुलित रहन्छ ।
यो पनि :घरको पुजाकोठामा भगवान विष्णु स्वरुप मानेर पुजिने सालिग्रामको स्थापना गर्नुहोस,सबै समस्याबाट मिल्नेछ मुक्ति:सनातन धर्म अनुसरण गर्ने धेरै मानिसहरूलाई शालिग्रामको बारेमा थाहा हुन्छ। कालो रंगको चिल्लो अण्डा आकारका ढुंगाको स्वरूपमा शालिग्रामको पूजा गरिन्छ। भक्तजनले शालिग्राम घरमा ल्याएर सिधै आसनमा विराजमान गराएर पूजा गर्न सक्छन्। शालिग्रामलाई भगवान श्री हरि विष्णुको स्वरूप पनि मानिन्छ। शालिग्रामलाई घरमा राखेर नियमित पूजा गर्नाले धेरै समस्याहरूबाट मुक्त हुन सकिन्छ। घरमा खुशी र समृद्धि आउँछ
शालिग्रामलाई भगवान विष्णुको स्वरूप मानिन्छ, त्यसैले उहाँलाई तुलसी अर्पण गर्नुहोस्। तुलसीबिना शालिग्रामको पूजा अपूर्ण मानिन्छ। यसरी स्वच्छ मनले शालीग्रामको पूजा गर्नाले हरेक कार्यहरूमा सफलता प्राप्त मिल्दछ। शालिग्राम र माता तुलसीको विवाहको प्रावधान पनि छ। भनिन्छ कि तुलसीको विवाह गरियो भने कन्यादान जस्तो सद्गुण फल प्राप्त हुन्छ।
यसो गर्नाले सबै प्रकारका पाप, कलह, आदि नष्ट हुन्छन्।तपाईंको घरमा धन सम्बन्धि समस्या छ भने पनि शालिग्राम स्थापना गरेर पूजा गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि घरमा शालिग्राम हुनु भनेको विष्णु र माता लक्ष्मीको बास हुनु हो। शालिग्रामको नियमित पूजा गर्नाले र जल अर्पण गर्नाले सबै प्रकारका कष्ट दूर हुन्छन्। घरमा कुनै पनि प्रकारको अभाव हुँदैन। शालिग्रामको अभिषेक गरिएको जल आफ्नो शरीरमा छर्कनु मात्र तीर्थयात्रा र यज्ञको समान हुन्छ।
शालिग्रामलाई नियमित स्नान गराएर चन्दन लगाउनु पर्छ। त्यसपछि तुलसीदल अर्पण गरेर चरणामृत चढाउनु पर्छ। यसले तपाईंको सबै मानसिक, शारीरिक र वित्तीय समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्दछ। भनिन्छ कि भगवान शिवले पनि शालिग्रामको प्रशंसा गर्नु भएको थियो। तसर्थ, शालिग्राम घरमा राख्दा महादेवको पनि कृपा प्राप्त गर्न सकिन्छ। धर्मशास्त्रका अनुसार शालिग्राम भएको ठाउँ मन्दिरको समान हुन्छ।
← मोडेल नीनाले कपाल दान गरेपछि फ्यानहरुले गरे तारिफ
धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी पुरा पढ्नुहोस… →